ဒါဟာ ALIEXPRESS အပေါ်သွားကြဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး: အခြေခံအကြောင်းတရားများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ - ALIEXPRESS - 2019
ဒါဟာ AliExpress အပေါ်သွားကြဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး: အခြေခံအကြောင်းတရားများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ
HP ကကနေပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်များ၏ကိုင်ဆောင်သူတစ်ခါတစ်ရံအသိပေးစာမျက်နှာပြင်ပေါ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှငျ့ရငျဆိုငျနေကြတယ် "ပုံနှိပ်အမှား"။ ဤပြဿနာကို၏အကြောင်းရင်းများအများအပြားရှိနိုင်ပါသည်, သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားဖြေရှင်းနေသည်။ ယနေ့တွင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အဓိကနည်းလမ်းများ၏ဆန်းစစ်ပြင်ဆင်ကြပြီ။
အဆိုပါ HP ကပရင်တာပေါ်ပုံနှိပ်အမှားပြုပြင်တာတွေ
တစ်ခုချင်းစီကိုနည်းလမ်းအောက်ပါကွဲပြားခြားနားသောထိရောက်မှုရှိပြီးတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အခြေအနေမှာအသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အများဆုံးရိုးရှင်းပြီးထိရောက်ထံမှလုံးကိုရှေးခယျြစရာမြား၏အမိန့်ကိုစဉ်းစား, သင် task ကိုဖြေရှင်းနိုင်မှညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ ပထမဦးစွာသို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့ဤအကြံပြုချက်များအာရုံစိုက်ကြောင်းအကြံပြု:
ကွန်ပျူတာကို Restart လုပ်ပြီးနှင့်ပုံနှိပ် device ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်။ အောက်ပါပရင်တာကိုဆက်သွယ်ထားသောမီ, အလိုဆန္ဒသည်အနည်းဆုံးတစ်မိနစ်၏ချွတ်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကျည်တောင့်စစ်ဆေးပါ။ တခါတရံအမှားတစ်ခုဆေးသုတ်ကျော်ရှိရာမှင်ရှိသူများကိစ္စများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါကျည်တောင့်ကိုအစားထိုးဖို့ဘယ်လိုပေါ်သတင်းအချက်အလက်, သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလင့်ခ်မှာဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုများအတွက်ဝါယာကြိုးများပါစစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါ cable ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ပရင်တာများအကြား data တွေကိုထုတ်လွှင်ကြောင့်သူနဲ့ချိတ်ဆက်ပေမယ့်ကောင်းသောအခြေအနေလုံးဝခဲ့ပါတယ်သာအရေးကြီးပါသည်။
ထို့အပြင်ကျနော်တို့မဟုတ်စက္ကူရှိမရှိသို့မဟုတ်ယင်း၏ကိရိယာယန္တရားကြောပိတ်ဆို့မှုအထဲမှာပါလျှင်ကျော်, စစျဆေးဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ A4 တစ်စာရွက်ဆွဲထုတ်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူကို bundle လာသည်ဟုလမ်းညွှန်ကူညီပေးပါမည်။
ဤအကြံပြုချက်များကိုကူညီမပြုခဲ့ပါလျှင်, ဖြေရှင်းရေးများအတွက်အောက်ပါနည်းလမ်းများများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုမှဆက်လက်ဆောင်ရွက် "ပုံနှိပ်အမှား" HP ရဲ့အစွန်အဖျားကိုသုံးနိုင်သည်။
Method ကို 1: ပရင်တာကိုစစ်ဆေးခြင်း
ပထမဦးဆုံးအရပျ၌အကြှနျုပျတို့မီနူးထဲမှာဟာ့ဒ်ဝဲ configuration ကိုစစျဆေးနှင့်ပြသရန်အကြံပြု "ဖုန်းများအတွက်နှင့်ပုံနှိပ်"။ သင်သာအနည်းငယ်ခြေလှမ်းများအောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်:
မီနူး "Control Panel ထဲက" နှင့်မှရွှေ့ "ဖုန်းများအတွက်နှင့်ပုံနှိပ်".
device ကိုမီးခိုးရောင်အတွက်မီးမောင်းထိုးပြမထားဘူးသေချာအောင်လုပ်ပါ, အဲဒီနောက်အပေါ်ယွမ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "ပုံမှန် Make".
ထို့အပြင်ကထုတ်လွှင့် settings ကိုစစျဆေးဖို့အကြံပြုသည်။ မီနူးမှ Go "ပရင်တာ Properties ကို".
ဒီနေရာတွင် tab ကိုစိတ်ဝင်စား "ဆိပ်ကမ်း".
ပစ္စည်းကို tick "bi-directional Enable" နှင့်စသောအပြောင်းအလဲလျှောက်ထားရန်မမေ့မလြော့ပါ။
အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးမှာက PC ကို restart ချလိုက်ပါနှင့်တိကျစွာတက်ကြွဖြစ်လာပြောင်းလဲဖို့ပစ္စည်းကိရိယာများပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်အကြံပြုသည်။
Method ကို 2: ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသော့ဖွင့်ရန်,
တခါတရံမှာပါဝါ surges ဒါမှမဟုတ်အစွန်အဖျားနှင့် PC ကိုအတွက်ရရှိလာတဲ့အမျိုးမျိုးသောစနစ်ကမအောင်မြင်မှုများ, မရှိတော့စနစ်တကျအချို့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်ကြသည်ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းပြချက်အဘို့နှင့်အမှားဖြစ်ပေါ် print ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျအောကျပါအထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်:
တနည်းကား, သွားပါ "ဖုန်းများအတွက်နှင့်ပုံနှိပ်"အဘယ်မှာ Right-Click နှိပ်ပြီးတက်ကြွစွာပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်, select လုပ်ပါ "ဟုအဆိုပါပုံနှိပ်တန်းစီ View".
ညာဘက်စာရွက်စာတမ်းပေါ်တွင် click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "Cancel"။ အားလုံးပစ္စုပ္ပန်ဖိုင်တွေနှင့်အတူဤပြန်လုပ်ပါ။ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းမဟုတ်သည်ဆိုပါကအခြားရရှိနိုင်နည်းလမ်းများထဲကတစ်ခုနှင့်အတူဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုထုတ်သယ်ဆောင်ရန်အောက်က link ကိုပစ္စည်းနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရအကြံပြုလိုတယ်။
Read more: အဆိုပါ HP ကပရင်တာပေါ်တွင်ပုံနှိပ်တန်းစီရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
သို့ပြန်လာ "Control Panel ထဲက".
ဒီနေရာတွင်တစ်ဦး string ကိုစိတ်ဝင်စား "န်ဆောင်မှုများ".
အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ရှာ "ပုံနှိပ်ပါ Manager ကို" ထိုသို့အပေါ်ကို double-click ဖျော။
အဆိုပါ "Properties ကို" အဆိုပါ tabs များသတိထားမိ "အထွေထွေ"နောက် startup type ကိုတန်ဖိုးရှိကြောင်းသေချာအောင်ဘယ် "အလိုအလျောက်"ဝန်ဆောင်မှုရပ်နားလိုက်နှင့်ဆက်တင်ကိုမသုံးဘူး။
ပြတင်းပေါက်ပိတ်ပြီးပြေး "My Computer ကို"အောက်ပါလိပ်စာသို့သွားရန်:
ကို C: Windows System32 spool PRINTERS
ကိုယ်ကသာအကြောင်းမိနစ်များအတွက်ရပ်တည်ရန်ဒါသည်, HP ကကုန်ပစ္စည်းကို turn off ပါဝါထောက်ပံ့ရေးကနေ disconnect လုပ်ဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုကြိုးစား, အဆိုပါ PC ကို restart ချလိုက်ပါ။
Method ကို 3: Windows Firewall ကို Disable
တခါတရံမှာ Windows Defender လုပ်ကွက် device ကိုမှတစ်ဦးကွန်ပျူတာကနေစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာမှားယွင်းနေစစ်ဆင်ရေး firewall သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောစနစ်ကမအောင်မြင်မှုများနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ယာယီနောက်ခံလူ windose ကို disable နှင့်နောက်တဖန်ပုံနှိပ်ကြိုးစားကြအကြံပြုပါသည်။ ဒီ tool များ၏ Deactivate အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်ပါ link များမှာအခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုတွေ့မြင်:
အသေးစိတ်: Windows XP, Windows 7, Windows 8 ကိုအတွက် firewall ကအားဖြုတ်ထားခြင်း
Method ကို 4: အသုံးပြုသူအကောင့်သို့ပြောင်းပါ
တစ်ဦးပုံနှိပ်ပေးပို့ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအရံပစ္စည်းကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပျက်သောက Windows အသုံးပြုသူအကောင့်, အတူမထားသည့်အခါပြဿနာတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားတခါတရံပေါ်ပေါက်။ ပြဿနာများ၏ဒီလိုမျိုးမှဦးဆောင်ရသောအသီးအသီးက၎င်း၏အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ကန့်သတ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ သငျသညျတစ်ခုထက် ပို. ထည့်သွင်းသင်တန်းသူတို့ကိုရှိပါကဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျ, အသုံးပြုသူအကောင့်ကိုပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ကဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ windose ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းအတွက်ထိုသို့ပြုမှမည်သို့အသုံးချ။
အသုံးပြုသူရဲ့ Windows7အသုံးပြုသူအကောင့်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို Windows 8, Windows 10: ဆက်ဖတ်ရန်
Method ကို 5: Windows ကို Repair
ဒါဟာမကြာခဏပုံနှိပ်အမှားဟာ operating system ထဲမှာအချို့အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိအတော်လေးခက်ခဲသည်, သို့သော် operating system ကိုပြည်နယ်အားလုံးပြောင်းလဲမှုများပယ်ဖျက်ရန်မှပြန်လာသောနိုင်ပါသည်။ Built-in အစိတ်အပိုင်း windose နှင့်ဤဘာသာရပ်အပေါ်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်မှု၏အကူအညီကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးသူအနေဖြင့်အခြားပစ္စည်းတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်နှင့်အတူဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအထဲကယူသွားတတ်၏။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: အကို Windows ပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက် Options ကို
Method ကို 6: ယာဉ်မောင်း Reset
ကျနော်တို့ကအမျိုးမျိုးသောထိန်းသိမ်းရေး၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုသူလိုအပ်သောကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်ဒီနည်းလမ်းကို ထား. , အရင်ကဆိုရင်ဘို့အတော်လေးခက်ခဲသည်။ အထက်အဘယ်သူမျှမညွှန်ကြားချက်သင်ကူညီမပြုခဲ့လျှင်, ကိုယ့် device ကိုယာဉ်မောင်းကို reinstall လုပ်ဖို့ရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဟောင်းတဦးတည်းဖယ်ရှားပစ်ရရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်အဘို့, အပေါ်ကိုဖတ်ရှု:
ဖယ်ရှားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးစီးအပေါ်သို့, အစွန်အဖျားမှဆော့ဗ်ဝဲ Installation နည်းလမ်းများတစ်ဦးထိတွေ့ဆက်ဆံ။ ငါးမရရှိနိုင်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ သူတို့တစ်ဦးစီကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားဆောင်းပါးထဲမှာခင်မင်သိကျွမ်းရချထား။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ပရင်တာများအတွက် Installing ယာဉ်မောင်း
သငျသညျ, အ HP ကပရင်တာရဲ့အမှားဆုံးမပဲ့ပြင်မှုနည်းလမ်းများကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ရှိအတော်လေးနံပါတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နောက်တဖန်အထက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုသင်အလွယ်တကူပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကူညီပေးပါမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်။
Mozilla ရဲ့ Firefox browser ကိုများအတွက် Yandeks.Bara
ESET NOD32 Antivirus ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ
ID ကို VKontakte Learn
Scan ဖတ်ဝုဏ်၏ပြည်တွင်းရေးနံရံများ Create - အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်လူနေအိမ်အိမ်၏ဒီဇိုင်းမှာစေ့စပ်နေကြတယ်သောသူတို့အဘို့တစ်မျှမျှတတဘုံလုပ်ငန်းတာဝန်။ arhikad ဗားရှင်းမှာတော့ 19 အလွယ်တကူလှည်းကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ tool ကိုပေးသည်။ ကျနော်တို့ပိုမိုနီးကပ်စွာသူ့ကိုကွညျ့ပါ။ ArchiCAD အတွက်မြို့ရိုးတစ်မောင်းကိုဖန်တီးရန်မည်သို့ ArchiCAD ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်သငျသညျပရိဘောဂအတော်ကြာအပိုင်းပိုင်း၏တံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်များနှင့်အတူအခန်းတခန်းရေးဆွဲကြပါပြီဆိုပါစို့။ ဆက်ဖတ်ရန်
တစ်ဦး flash drive ကို (စတာတွေကို USB-flash drive ကို, MicroSD) ကနေရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုဖယ်ရှားဖို့ဘယ်လို။
Windows ကို 10, 8.1, နဲ့ Windows7Rainmeter Making